११ असार । कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य ठम्मर विष्टले कर्णालीको बजेट असन्तुलीत भएको आरोप लगाएका छन् । सक्तापक्षका सांसद समेत रहेका विष्टले बजेट मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको ईसरामा चलेको आरोप लगाए ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासमा चरम लापरबाही भएको भन्दै २४ वटा पर्यटकीय क्षेत्र छुट्याउदा राजकाँडा दरवारको नाम दिएकोमा बजेटमा नपर्नु दुखको कुरा भएको बताए । उनले प्रश्न गरे, "हाम्रो क्षेत्र सबै मरुभुमी छ? सबै जलासय छ ? पर्यटन मन्त्रीको क्षेत्रको ढुङ्गो समेत पर्यटन हुने हो ?"
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर संकटग्रस्त भएको भन्दै यो बजेट कम भएको बताए ।
तलब भक्ता, गाडी, भरभाडा र सुविधाका विषयमा प्रतिपक्षले मिलोमतो गर्ने र विकासको मुद्धामा चुप लागेको आरोप लगाए । उनले भने, "म प्रतिपक्षको नेतालाई चुनौती दिन चाहान्छु, तपाईको ठाउँमा म भएको भए यहाँ ज्यान जान्थ्यो होला सन्तुलीत बजेट नभएसम्म कोण छोड्ने थिइन् ।"
उनले प्रश्न गरे, "व्यक्तिगत बार्गीनिङका लागी छोड्ने, प्रदेशको मुद्धाको लागी सम्झौता गर्ने ?" प्रतिपक्षले सशक्त भुमीका नखेलेको प्रति उनले अक्रोस पोखे र प्रदेशको मुद्धामा खरो उत्रन आग्रह गरे । कर्णालीको बजेट मन्त्रीका क्षेत्रमा केन्द्रित भएको समेत आरोप लगाए ।
भिडियो, फोटो स्रोत : सुनगाभा टिभी
२०७६ असार ११ मा प्रकाशित